I-Tango ingomnye wemidanso eyingozi, imidaniso yothando. Amandla angalawulwayo, ukucaca kwemigca kunye nesigqi, konke oku kuchaza ngokucacileyo i-tango. Okwangoku, i-tango ineentlobo ezininzi. Phakathi kwazo kukho zombini, izikhombisi zebhola, kwaye ziqinileyo, zinomdla wase-Argentina. Mhlawumbi into eyona yinto engavamile yiFinnish. Ungayichaza njani le mdaniso ngokubanzi? Idibanisa ngokugqithiseleyo inzondelelo kunye nobudlova, ulwalamano olunzulu kunye novelwano oluqhelekileyo, ukukhanya kweemvakalelo kunye nobunzima bemigca. I-Tango ngumdaniso wezinto ezahlukileyo, ezi ziyimvakalelo ezithunyelwa ngokuhamba. Mhlawumbi yikho kutheni i-tango inqobile izigidi zabantu abalandeli emhlabeni jikelele.
I-tango yase-Argentina kunye nezitayela
Eyona nto eyenziwa ngokugqithiseleyo kuze kube yimini yenziwa ngomculo ohlukeneyo. Ngokuqhelekileyo, umdaniso ulwahlukileyo kunye nokuhamba okusemgangathweni kunye nethempo. Ngeli xesha, abaninzi abadansa abayikukhetha ukhetho olulodwa, kodwa basebenzise ngokungafaniyo, amaxesha amaninzi imibono. Umqathango oyintloko waluphi na uhlobo lwe-tango luyakwamkela. Ukusukela kumgama (kuvulwe okanye kuvaliwe, ngaphandle kweminye imfutshane) yinto ebalulekileyo. Kuvulekileyo-uphawu olubanzi lwezinto ezihambayo, kungakhathaliseki ukuba zithintele inxalenye yamaqabane. Iintlobo ezithandwa kakhulu kwi-tangos namhlanje:
Ukuqala kwayo ukusuka kuma-40-50. Kubonakaliswe yintsebenzo kwisithuba esityebileyo kunye nokudibanisa kwamahlombe amaqabane. I-Milongero isitayela esisondelene kakhulu, apha umfazi usondelene kakhulu nomlingane, ngokuqhelekileyo ukuze isandla sakhe sobunxele sisemva kwentamo yomntu. Ngokuba lolu hlobo lwe-tango lubonakaliswe ngokubambisana okuqinileyo kunye noqhagamshelwano oluphezulu unomphela ukujika okanye i-ochos. Isinyathelo esibalulekileyo, esibizwa ngokuthi "ocho kortado." Le ndlela ifanelekile kwizibini zothando. Nantsi yonke into yakhiwa ngokuvisisana kunye nentlonipho. Umlingani, njengokuba kunjalo, uphulaphule omnye ngoncedo lokunyakaza kwemidaniso. I-Milongero ivula amathuba amaninzi kulabo abangesabi uvavanyo.
Ubonakaliswe ngumbono othile wecala. Ukwamkela kuyinto ehambelana nokusondelelana okanye ukuvuleka, kodwa kusenokuba ne-bias (ukusuka kwinqanaba lomlingani). Esikhundleni V, umkhanyo uyafana: umxhesho wesifazane osekhohlo usondele kwiphepha elifanelekileyo lomntu kunelungelo lakhe ngakwesobunxele. Ngomdaniso osondeleyo, iingalo zikhululekile, abadansi bangenza ukuhamba okuthile.
Isimboli seClub yeTango
Umzekelo obalaseleyo wokudibanisa iifayile ezimbini, ezibizwa ngokuthi i-salon kunye ne-milonguero. Kuye, sondela ngokukhawuleza ngexesha lokujika.
Tango entsha okanye iTango Nuevo
Ukuzalwa kwakhe kuyindlela yokuhlalutya ngokufunda ngokubanzi isakhiwo somdaniso. Kuluhlu lweentlobo ezitsha, ukudibanisa kwamanyathelo. I-Nuevo - tango enezixhobo ezivulekileyo, kubaluleke kakhulu kunikezelwa ngamnye kumalingani. Abadansi bagcina i-axis yabo.
Ifomu ehamba phambili kakhulu ye-tango, kubadlali ibonakaliswa ngokulondolozwa komgama omkhulu phakathi kwabo kunye namanyathelo angaphandle kwamkelwa. Le ndlela ibonakaliswa ngabanye bokudlala, kunye nokubonakala kwechic. I-Tango Orillero inokudansa ngezo zibini ezivulekileyo nezivulekileyo.
Ifomu yomlando we-tango. Ubonakaliswe ukutshintshwa kwisimo V, uvale udibanise ukuguquka kwamadolo ngexesha lokuhamba. Ingqwalasela ekhethekileyo ihlawulwa kumanyathelo.
Ukususela kwicala libonakala lilula kakhulu. Uchungechunge lwamanyathelo athile kunye nento efana nokuhamba, ebizwa ngokuba yi-Kaminada. Akukho nto inzima. Le ndlela ikhetha ukulula nokucaca. Isiseko salo ngamanyathelo ayisiseko kunye namanani. Kuphela kwimizila eguqukayo kunye namanani.
I-Tango ibonisa "inkolelo"
Le ndlela ye-tango, esetyenziswa rhoqo kwisigaba. Intlangano ekhanyayo yeendlela ezahlukeneyo, ukuzalisekisa izinto ezinomdla, iingalo ezivulekileyo, oku kuluphawu lweFantasy. I-Tango Fantasy idinga iindleko zamandla aphakamileyo, izakhono zobuchwephesha obuphezulu, ukulungelelanisa ukulungelelanisa kunye nokuqonda kakuhle kweqabane lakho.
Enye yezona zinto zinomdla kakhulu kwaye ezingavamile ukuthetha isiFinnish .
Kwavela kwimimandla yaseFinland, emva kweMfazwe Yehlabathi yesiBini. Umdali walo ucinga ngokufanelekileyo u-Toivo Kärki. Esi simboli sibonisa ukuphuculwa kwayo kunye nesigqi. Kuphantse kwimeko encinane. Yintoni eyona nto inomdla, i-finskotetango kwii-expanses zeli lizwe elifanayo libhekwa njengomsebenzi wabantu. Ukugqithiswa kwesi sikhundla kwi-expanses yaseFinland iwela kuma-60s, xa uRayo Taipal ebhala i-tango ebizwa ngokuba yi "Fairy Land".
Ukutshatyalaliswa komonakalo weTango waseFinland kwiminyaka engama-90 wazala ukutshatyalaliswa okutsha kwalomdaniso. I-Tango yaqala ukubonakala kuyo yonke indawo kwi-cinema, kwiprogram yeTV, amanqaku, njl. Kufuneka kuqatshelwe ukuba unyaka ngamnye edolophini elincinane laseSeinäjoki, iifizi zezifestile ze-tango zaseFinnish zidluliselwa.
Yintoni ephawulekayo kule style? Okokuqala, lo mdlalo we-ballistic. I-Vfinsk Tango inomnxeba oqinileyo ezinqeni, elandela ukucaca kwemigca kunye nokungabikho kwezinto ezibonakalayo ezihambileyo zentloko.
Mhlawumbi, enye kunye neendlela zokwazi kuphela. Lo ngumdaniso wezemidlalo, owaba yinto enyanzelekileyo kwinkqubo yemincintiswano yamazwe ngamazwe kunye nokhuphiswano. Ibhola le-Ballroom ibaluleke kakhulu umdaniso onzima. Akukho zilungiso apha, njengase-Argentina. Kukho isethi yemigaqo ethile kunye nemithetho: landela imigca ethile, isikhundla somzimba kunye nentloko yabadlali, ukusetyenziswa ngokukodwa kwezinto ezifunekayo kunye ne-mnogopodobnoe. Ukuhambelana komculo kule mdaniso kuyafana - i-laconic kwaye ichanekile. Le tango ayikwazi ukubizwa ngegama kwaye ilula, xa kuthelekiswa nezinye izitayela ezingentla.
Indlela yokuyidonsa idolli iTilda
Yintoni umntwana we-yoga okanye i-yoga kubantwana?
Imihla yeenwele kunye neoli yeentlanzi
Imibukiso yamaNazi kaElizabethe II ibangele i-scandal
Indlela yokupheka ikhekhe lePasika elimnandi kakhulu, iirephepheni ezihlolwe kunye neefoto
Ungayincoma njani ngokuqhawula umtshato?